Conte: Dalabaadka Ronaldo uga yimid horyaalka Shiinaha waa Sumcad dil!!
Thursday, January 24th, 2019 - 14:18:49
Saturday December 31, 2016 - 09:59:59 in Wararka by Muuse Cabdi
Chelsea macallinkeeda Antonio Conte ayaa is weydiiyay niyad ahaan dalabka dhanka suuqa ah ee ciyaartoyda uga imaanaya horyaalka Chinese Super League xilli sida la wariyay ay yabooh usoo direen Real Madrid xiddiggeeda Cristiano Ronaldo.
Keddib qaadashadii Oscar oo ka tegay Chelsea kuna biiray CSL kooxda ka dhisan ee Shanghai SIPG – waxaa hadda kooxda uu tababaro Andre-Villas Boas ay doonayaan xiddigo kale- Carlos Tevez ayaa ku biiray Shanghai Shenhua weliba heshiis lagu sheegay kii waallida ahaa, wakiil Jorge Mendes ayaa sheegay in Ronaldo loosoo jeediyay hadda qiimo dhan €300milyan oo uu kula biirayo horyaalka Shiinaha koox ka dhisan oo aan la shaacin.
Ballon d'Or ninka heysta Ronaldo ayaa hoos u dhigay in uu ku biiro horyaalkaas, wuxuuna lasii shaqeyn doonaa kooxda Yurub iyo Dunida ee Madrid.
Si waliba, Conte ayaa si cad u diiday yirina waa gef iyo meel kadhac in Ronaldo laga soo dalbado horyaalka China.
"Waxaan u maleynayaa waa sheeko la yaab leh. Aad ayaan uga hadleynaa taasoo kale, aad, lacag badan malaha sumcad badan. Ma doonayo in aan taas aamino," Conte oo ka hadlayay marti gelintooda Stoke City ciyaarta Premier League ayaa sheegay.
"Ma doonayo taas in aan aamino. Waayo, waxaan filayaa, waxa hadlayaa annaga maaha ee waa lacagta, xiddigaha sidaan u waaweyn iib maaha.